MP4 in Xvid: Sida loo Beddelaan MP4 in Xvid on Windows iyo Mac
> Resource > Beddelaan > MP4 in Xvid: Sida loo Beddelaan MP4 in Xvid in Windows iyo Mac
Xvid waa maktabadda video codec ah ka dib MPEG-4 ee caadiga ah. Dadku waxay inta badan la wadaagi videos ama filim guriga-dhigay Internet-ka iyadoo qaab XviD, sababtoo ah Xvid lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC karaa video tayada asalka sii hayo. Tusaale ahaan, sida aad u heli file MP4 ah in Xvid?
Waxaad isku dayi kartaa Converter video ah inay u beddesho MP4 in Xvid khasaara eber-tayo. Haddii aad MP4 video laga qaaday kaamarooyinka digital, telefoonada gacanta, ama lagala soo bixi internetka, kaliya waxa ay qaadataa qasabno yar si ay u buuxiyaan qaab beddelidda. Ka dib markii MP4 in ay Xvid video diinta, aad xitaa ka ciyaari kara MP4 on Xvid ciyaartoyda DVD socon, telefoonada gacanta, HDTVs ama xitaa ciyaartoyda Blu-ray.
Best MP4 in Xvid Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Beddelaan videos in kasta oo qaab si Xvid, AVI, MP4, MKV, MOV, MPEG, iwm
• horena filaayo in qalabka kala duwan oo ay ka mid yihiin Apple iyo telefoonada Android, Madaxweyne Siilaanyo, PSP, iyo in ka badan.
• Gubashada video in disk DVD, DVD folder iyo files ISO.
• Download videos ka tiro balaadhan oo ah goobaha video qaybsiga sida YouTube, Dailymotion.
• Ku dar metadata in wax lagala soo bixi videos, bandhigyada TV iyo filimada guriga.
# 1 Sida loo Beddelaan MP4 in Xvid la Wondershare Video Converter Ultimate
# 2 More doorasho: MP4 Free in Xvid Converter
# 3 is barbar dhigo Video Converter Ultimate iyo Video Converter Free
# 1 Sida loo badalo MP4 in Xvid
Iska akhriso tutorial hoos ku qoran oo ku saabsan sida loo badalo MP4 in Xvidfor Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad socda Mac ah, oo kaliya ay bartaan sida loo badalo MP4 in Xvidfor Mac (Yosemite ka mid ah) halkan .
1. Import files MP4
Si aad ku dari files MP4, waxaa jira ee button laga heli karaa si aad u dajiyaan il videos ku haboon. Sidoo kale, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa oo iyaga iska suuqa kala barnaamijka. Marka dhammaan faylasha ku raran yihiin, bedelba waad karaa amarka ay soo jiitaa kor ama hoos, oo iyaga ku milmaan galay mid ka mid file adigoo ka soo Doorashadan on hoose ee suuqa kala barnaamijka.
2. Dooro qaabka wax soo saarka sax ah
Sida aad ogtahay, Xvid waa codec in cadaadin aad video files. Sidaas halkan, waxaan u baahan nahay in la qeexo codec ee qaab faylka.
Riix image qaabka ay u arbushin ilaa ay "Qaabka Output" window. Barnaamijkaani wuxuu bixiyaa naf dhibkeed of video & audio qaabab, 3D, HD ayaa sidoo kale ka mid ahaa. Laakiin si ay u dejiyaan Xvid sida codec, waxaad u baahan tahay in ay doortaan MOV ama AVI sida wax soo saarka, ka dibna riix "Settings" marsho button in dheeraad ah u astaysto.
3. MP4 Edit videos (optional)
Tani MP4 in Xvid software Converter ka mid ah dhammaan hawlaha tafatirka caadi ah waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si ay u caawiyaan taaban ilaa files MP4 aad. Si aad u hesho suuqa kala edit ah, riix badhanka Edit ka sokow video clip kasta. Halkan, waxaad isku shaandheyn karaa, dalagga, jar videos MP4, dalban saameyn gaar ah, oo ku dar watermark, subtitles, iyo in ka badan.
4. Ku bilow diinta MP4 in Xvid
Video Converter 's interface, waxaa jira button badalo, waxaa ku dhuftay inuu ku soo bilowdo MP4 inay diinta ka Xvid isla markiiba. Markii diinta la sameeyo, waxaa laga yaabaa in aad jiidi faylasha diinta wax Xvid ciyaartoyda socon in ay ku raaxeystaan ​​on go ah!
Video Tutorial: Sida loo badalo MP4 in Xvid for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 2 MP4 Free in Xvid Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• 100% FREE video Converter si loogu badalo MP4 in Xvid oo dheeraad ah qaabab video.
• interface dareen leh, aad u fududahay in la isticmaalo.
• Download Youtube videos xawaare degdeg ah.
• shakhsiyeeyo video in qaab kasta oo la function ka classic video tafatirka.
Fiiro gaar ah: tutorial ku saabsan sida loo isticmaalo this MP4 Free in Converter Xvid waa isku mid sida in Video Converter Ultimate.
Haddii aad weli xiiso Video Converter Ultimate, kaliya waxa ay isku dayaan hoos ku qoran.